Taageerayaasha Liverpool oo dalbaday in lacayriyo Cayaaryahan kooxdaas ah oo ku maadsaday Guuldaradii Red Star Belgrade kadib? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Taageerayaasha Liverpool oo dalbaday in lacayriyo Cayaaryahan kooxdaas ah oo ku maadsaday Guuldaradii Red Star Belgrade kadib?
(07-11-2018) Taageerayaasha kooxda kubada Cagta Liverpool ayaa shaaca ka qaaday in ay doonayaan in gebi ahaan lakansalo heshiiska uu kujiro kooxda mid ah Caayartoyda Naadigaas oo ku maadsaday Guuldaradii ka soo gaaray Kulankii koobka Horyaalada yurub ee ay lacayaareen kooxda dalka Sebia ee Red Star Belgrade.
Lazar Markovic oo ay leedahay kooxda Liverpool ayaa lacadeeyey in uu Like Saaray Guuldaradii Liverpool ee lagu faafiyey barta Twitter-ka taas oo micno ahaan Noqoneysa in uu Raali kayahay Guuldarada ku dhacday kooxda dalka England.
Markovic ayaa Liverpool kaga soo biirey kooxda Benfica ee dalka Portugal 2014 kadib markii ay bixiyeen lacag dhan £20m Waxaana Ninkaan uu kujiraa kursiga keydka Liverpool kadib markii uu ku fashilmay amaah uu xiligii hore ugu Cayaarayey Hull City oo u laabatay heerka labaad sidoo kale waxa uu horay ugu soo Cayaaray kooxda Garaacday Liverpool ee Red Star Belgrade.
Jamaahiirta Liverpool ayaa aad ugu Weeraray baraha bulshada Cayaaryahan Lazar Markovic ayaa muumulka kooxdaas ka dalabaday in ay fasaxaan oo lakansalo qandaraaskiisa marka lagaaro bisha Janaayo 2019 oo uu dib u furmi doono suuqa kala iibsiga.